Cool | My Burmese Blog
Posts in Category: Cool	Glennz Tees Concepts for 2011
On May 2, 2011	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Cool, funny	Glennz ဆို​တာ illustration ပွိုငျ​ပှဲ​တဈ​ခု​ပါ။ သူ​က t-shirt တှေ​မှာ သုံး​ဖို့ အတှကျ ဒီ​ဇိုငျး​ဆှဲ​ရ​တာ​ဖွဈ​ပွီး vector based ဂ​ရပျ​ဖဈ​နဲ့ ဟာ​သ​မွောကျ​တဲ့ ဒီ​ဇိုငျး​ဖွဈ​ရ​ပါ​တယျ။ ဒီ​နှဈ​အတှကျ နှဈ​ဝကျ ပွိုငျ​ပှဲ​ဝငျ ဒီ​ဇိုငျး​တှေ Behance မှာတှတေ့ာကွောငျ့ ပွနျ​ရှဲ​လိုကျ​ပါ​တယျ။ တကယျ​ရီ​ရ​တဲ့ ပုံ​တှေ​ပါ။ ကှ​နျြတျော့​ ဝါသနာ​က အဲ​ဒီ​လို ဟာ​သ tee shirt တှေ ဝတျ​ရ​တာ သဘောကြ​ပါ​တယျ။ ပငျြး​နေ​တယျ​ဆို​ရငျ အဲ​ဒီ​မှာ သှား​ကွညျ့​ပွီး အားရ​ပါး​ရ​ရီ​နိုငျ​ပါ​တယျ။ သဘောကြ​တဲ့ ပုံ​အခြို့​ကို ဒီ​မှာ အမွညျး​တငျ​ထား​လိုကျ​ပါ​တယျ။ funny, Illustration	Continue Reading
Under Skin ~ Anatomy Map
On March 19, 2010	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Cool, Design	ကို စေတန် ရဲ့ Web Routing ဆိုတဲ့ Map တွေ့ဖူးမယ် ထင်တယ် အခုကတော့ Sam Loman ရဲ့ Anatomy Routing, Transit Map ပါ။ London ကလို UnderGround မြေပုံတော့ မဟုတ်ပါဘူး.. Under Skin လို့သက်သက်ပါပဲ =D ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး creative ကောင်းလို့ မှတ်ပုံတင် blog ပုံ တင်ထားတာပါ။ Design, funny	Continue Reading
D3 Earthquake Kit
On August 13, 2009	by Htoo Tay Zar	With	3 Comments	- Cool, International News	လွှန်ခဲ့တဲ့ ရက် မနက် အစောဘက် ငလျင်လှုပ်ပြီးတဲ့ နေ့မှာပဲ တိုက်တိုက် ဆိုင်ဆိုင် ကြည့်မိတဲ့ site တစ်ခုက Emergency Kit Packaging Design တစ်ခုကိုတွေ့လို့ ပုံပြန်တင်လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီဇိုင်းမိုက်ပြီး compact ဖြစ်တာမို့ လက်တွေ့လဲ အသုံးဝင်မှာပါ။ သူ့ထဲမှာ First-aid, Food+Water, Shelter+Light, and Toiletry တွေပါတယ်။ ကြည့်ရတာ ဈေးကတော့ သေးမယ် မထင်ဘူး။ ဘာပဲပြောပြော အရင်က အဲဒီလောက် မဟုတ်ပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်းတော့ Natural Disaster တွေကို လန့်လာနေတော့ ပစ္စည်းတွေလဲ ကြည့်တတ်လာပြီလို့ ပြောလို့ရတယ်။ အမှန်တော့ ဒါမျိုး ပစ္စည်းတွေက NGO မှာ volunteer လုပ်မှ ကိုင်ဖူးမြင်ဖူးရတာ မဟုတ်လား။
Design	Continue Reading
Honda Insight ~ Best Video Ads on the Planet
On April 28, 2009	by Htoo Tay Zar	With	2 Comments	- Amazing, Cool, Creation	Honda ရဲ့ ကားကြော်ငြာ video ကို ဒီနေ့ Vimeo မှာ ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်းကြိုက်လို့ ပြန်တင်လိုက်တယ်။ သူကတော့ Let it Shine လို့ နာမည်ပေးထားတယ်။ Best Video Ads on the Planet လို့ပါ တပ်လိုက်တယ် Apple ကြော်ငြာတွေလိုပဲ စကားလုံး အကြီးကြီးတွေလျှောက်သုံးတယ်လို့ တော့မထင်ပါနဲ့။ ပြောတာမပိုဘူးဆိုတာ ကြည့်ရင် သိမှာပါ။ Pixel Art လိုပုံစံမျိုးကို ကားတွေနဲ့ လုပ်ပြသွားတာပါ။ လုပ်ရတာ တော်တော်ကျင့်မှရမယ့်ပုံပါ။ ဒါမျိုးပုံစံကို တစ်ခါကြည့်ဖူးတယ် တိုက်ခန်းတစ်ခုက အခန်းတွေ မီးတွေ အဖွင့်အပိတ်လုပ်ပြီး အရင်တုန်းက portable game က snake ဆော့သလို ဆော့ပြတာတော့ ကြည့်ဖူးတယ်။ အခုကတော့ ကားတွေနဲ့ လုပ်တာပေါ့။ တကယ်မိုက်ပါတယ်။
Cool, Video	Continue Reading
On February 5, 2009	by Htoo Tay Zar	With	2 Comments	- Cool, Download	Age Calculation ဆိုတဲ့ Excel ဖိုင်လေးနဲ့ စာဖတ်သူရဲ့ လက်ရှိ အချိန်အထိ ကုန်ခဲ့ပြီးတဲ့ အချိန်၊ နာရီ၊ စက္ကန့်တွေ အထိ အတိအကျ သိလုို့ ရမှာပါ။ နေဖို့ လက်ကျန် အချိန်တော့ တွက်မပေးနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နာရီပိုင်းလောက်တော့ တကယ်အချိန်နဲ့ ကွာနေမယ်ထင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီမှာ တွက်ဖို့ မွေးနေ့ ရက်၊ ခုနှစ်ပဲ ထည့်ပေးရတယ်။ အချိန် အတိ အကျ မထည့်ရလို့ပါ။ သူက excel formula သုံးထားတဲ့ ဖိုင်ပါ။ နောက်ဆုံး မွေးနေ့လဲ အလိုလျောက်တွက် ပေးပါတယ်။
On December 20, 2008	by Htoo Tay Zar	With	1 Comments	- Cool	ဒီရက်ပိုင်း နဲနဲ အလုပ်ရှုပ်နေလို့ ပို့စ်တောင် မတင်ဖြစ်ပါဘူး။ အခုတော့ Creative Advertisement ဆိုပြီး မနေ့ညက စက်ထဲက ဖိုဒါတွေ ရှင်းရင်းတွေ့တဲ့ သိမ်းထားတဲ့ အိုင်ဒီယာ မိုက်တဲ့ ကြော်ငြာလေးတွေ တင်လိုက်ပါတယ်။ ဒီထဲက ၂ ခုက အရင် နှစ်က Cool Ads That Make Me Click ဆိုပြီး တင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုတော့ ကျန်တဲ့ ၂ ပုံပါတင်လိုက်တယ်။ အကြိုက်ဆုံးကတော့ အပေါ်က Hard Rock cafe` ကြော်ငြာပဲ The Official Food Of Rock ဆိုတဲ့ စာသားလေးကလဲ မိုက်တယ်။ \_m/ \_m/
Cool	Continue Reading
On December 12, 2008	by Htoo Tay Zar	With	1 Comments	- Adobe, Cool, Web	ဒီနေ့ Adobe Cards ဆိုတဲ့ ဆိုဒ်ကို ၀င်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ အစက Adobe ကလုပ်တဲ့ အွန်လိုင်း ဖဲရိုက်တဲ့ ဂိမ်းထင်ထားတာ ကြည့်လိုက်တော့မှ Adobe Creative Suit3~ CS3ကြော်ငြာဖြစ်နေတယ်။ CS4တောင်ထွက်နေမှ CS3 ကြော်ငြာ ကြည့်ဖူးတော့တယ်။ ကြော်ငြာကတော့ အတော်မိုက်တယ်ဗျာ Flash နဲ့ လုပ်ထားတယ် အိုင်ဒီယာ လုံးဝ ကောင်းတယ်.. ကြည့်ရင်းနဲ့ တဖြည်းဖြည်း အားငယ်လာတယ်။ Flash မှ မသုံးတတ်တာကိုး သူလုပ်သွားတာတော့ ဖဲချပ်လေးတွေနဲ့ ကြော်ငြာ လုပ်ထားတယ် မကြည့်ရသေးရင် ကြည့်လိုက်ပါဦးဗျာ။ အရင် Flash နဲ့ Firefox3ကြော်ငြာလဲ မိုက်တယ်ဗျ။ ကြည့်ကြည့်ပါဦး။ပျော်ရွှင်ပါစေ။ ။
Adobe, Cool, Web	BarCode Art
On October 13, 2008	by Htoo Tay Zar	With	1 Comments	- Cool	Barcode ဆိုတာ ကုန်ပစ္စည်းတွေမှာ ထုတ်ခဲ့တဲ့ရက်၊ ဈေးနှုန်းစတာတွေကို မှတ်သားပေးတာ မျဉ်းကြောင်းလေးတွေ သုံးပြီး ပြတာ အခုဆို ရိုးသွားပြီ ဖြစ်လို့ အနုပညာနဲ့ ပေါင်းပြီး အလှအပလေးတွေ လုပ်ဖို့ ဂျပန်က အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ စမ်းနေတယ် လို့သိရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာတော့ ဘားကုဒ်ကို စူပါမားကတ် တချို့ သာလျင် သုံးတာတွေ့ပါတယ်။ City Mart လို ဆိုင်မှာတောင် ဘားကုဒ် အစား ရိုးရိုး ဈေးနှုန်းကတ် တိပ်မှာ ဂဏန်းကုဒ်သုံးပြီး တွက်တာပဲရှိပါတယ်။ အောက်မှာ တော့ နမှုနာ ဘားကုဒ်လေးတွေ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
On September 2, 2008	by Htoo Tay Zar	With	2 Comments	- Cool	145,186 People
ဒီနေ့ည ဘာမှလုပ်စရာမရှိပဲ အားနေတာနဲ့ ပျော်စရာလေးတွေ ရှာဖို့ အရင်သွားနေကြ Mingle ကို ပြန်သွားဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ widget အသစ်တစ်ခုတွေ့လို့ စမ်းလိုက်တယ်။ The Death Report တဲ့… သူက ကိုယ်မွေးတဲ့နေ့ ထည့်လိုက်ရင် ကိုယ်မွေးတဲ့နေ့မှာ ပျမ်းမျှလူသေတဲ့ အရေအတွက် နောက် နာမည်ကျော်တွေ ဘယ်သူတွေ သေလဲ.. နောက် ဘာ disasters တွေဖြစ်ခဲ့လဲ.. နောက် ကိုယ်နဲ့ မွေးနေ့တူတဲ့ နာမည်ကျော်တွေကို တခါတဲ ရှာပေးပါတယ်။ ကျွန်တော့်မွေးနေ့ ထည့်လိုက်တော့ အပေါ်က ပြထားတဲ့ အတိုင်းပဲ 145,186 နီးပါးတစ်နေ့တဲမှာ သေပါတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ မွေးနေ့တူတာက Red Hot Chili Peppers က ဂစ်တာသမား Hillel Slovak နဲ့ တနေ့တဲ မွေးတာတွေ့ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ result တွေက အောက်ပါ အတိုင်းပါပဲ။ စာဖတ်သူလဲ ကိုယ်မွေးတဲ့နေ့မှာ ဘယ်သူတွေသေလဲ၊ ဘယ်လို နာမည်ကြီးတွေ မွေးလဲ သိချင်မှာပဲ ထင်တယ်…. သိချင်ရင် The Death Report မှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ။ ။
funny, Quiz	Continue Reading
Fold Your Shirt Quickly
On July 9, 2008	by Htoo Tay Zar	With	5 Comments	- Cool, Uncategorized	Bro ဦးသိန်း ဘလော့ခ်က ပို့စ်အဟောင်းတွေ ပြန်ဖတ်ရင်း ဒီ t-shirt ခေါက်တဲ့နည်းလေး ကျွန်တော်ပြန်တင်လိုက်တာပါ။ တီရှပ်ကို အမြန်ခေါက်တဲ့ နည်းလေးပါ။ ဂျပန်က လုပ်တဲ့ဆိုဒ်ထင်တယ်။ Metacafe မှာ လည်း ဗီဒီယိုကြည့်ဖူးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အမြန်ခေါက်ကြည့်ရအောင်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ။